Farmaajo oo ku wareersan labo wado midii uu mari lahaa | KEYDMEDIA ONLINE
5 May 2021 Heshiis laga gaaray qalalaasihii Muqdisho ka dhacay
5 May 2021 Musharaxiinta iyo Beesha Caalamka oo shiray
5 May 2021 Guddigii farsamada ee Rooble magacaabay oo la shiraya Qoorqoor iyo Guudlaawe
5 May 2021 Maamulka Gobolka Benaadir oo isku shaandheyn sameeyay
5 May 2021 RW Rooble oo la shiraya xubnaha Beesha Caalamka
5 May 2021 Qarax ka dhacay degmada Kaxda
5 May 2021 Wabiga Shabeelle oo ku fatahay degaanno hoos taga Jowhar
5 May 2021 Dagaal ka dhacay galbeedka magaalada Baladweyne
5 May 2021 RW Rooble oo u ambabaxaya safar dibadda ah
5 May 2021 Farmaajo oo billaabey qorshe cusub oo taageero ku raadinayo
4 May 2021 Axmed Madoobe oo kulan la qaatay saraakiil Mareykan ah
4 May 2021 Guddiga la dagaallanka Musuqmaasuqa oo guddoomiye doortay
4 May 2021 Wasiir cusub oo la magacaabay
4 May 2021 Guddi loo magacaabay dagaalladii Muqdisho ka dhacay
4 May 2021 Ergeyga Qatar oo wali wada kulamada Siyaasiyiinta
4 May 2021 Laftagareen oo si deg deg ah ugu laabtay Baydhabo
4 May 2021 Ciidamada gadoodsan oo iska soo dhex saaray guddi ka wakiil ah
4 May 2021 Gen Cabdalla: “Yaa leh ciidamada sida gaarka ah u tababaran”?
4 May 2021 Ergeyga Qatar oo ka hadlay sababta uu Muqdisho u joogo
3 May 2021 Villa Somalia oo beenisay in Farmaajo uu haysto dhalasho Kanadiyaan ah
Farmaajo oo ku wareersan labo wado midii uu mari lahaa
Waxaa isa soo taraya cadaadiska Beesha caalamka iyo baaqyada in dib uu ugu laabto Miiska wadahadallada doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo ayaa ka fekeraya labo wado midii uu marai lahaa kadib markii ay kusoo xoogeysteen baaqayada iyo cadaadiska uga imaanaya Beesha caalamka.
Inuu ku adkaysto Muddo-kordhinta, oo labo sano dalka sii xukumo iyo inuu ka tanaasulo damacaas oo dib ugu laabto miiska wadahadalka, islamarkaana ogolaado inay doorasho dhacdo sanadkan gudihiisa.
Hadii uu diido baaqa beesha calaamka, waxaa dhici karta in Farmaajo cunaqabateyn la saaro iyo xayiraado dhinaca safarka, taasoo Mareykanka iyo Midowga Yurub dhawaan ay ugu hanjabeen.
Waxaa haysta Farmaajo labo daran mid dooro, inuu muddo-kordhinta ka noqdo ama inuu liiska madow ee Mareykanka galo, taasoo dhaawacayso mustaqbalkiisa siyaasadeed isaga iyo kuwa kale ee kala shaqeeyay in labo sano loogu daro.
Midowga Afrika, IGAD, Midowga Yurub iyo Mareykanka dhamaantooda waxay isku raaceen diidmada Muddo-kordhinta sharci darrada ah, iyagoo sheegay inay khatar gelinayso amaanka qaranka iyo midka gobolka, waxayna hoosta ka xaqriiyeen in hadiii dhexdhexaadinta lagu guul-dareystay la cunaqabateeyo Farmaajo.
Farmaajo wuxuu waayay taageeradda Midowga Afrika taasoo dhawaan u tagey Congo, oo kula soo kulmay dhigiisa dalkaas oo hadda ah gudoomiyaha Ururka, waxaana muuqata inuu taligii-taliyaha ku socdo wado afka hore ka xiran.
0 Comments Topics: farmaajo
Warar 22 April 2021 7:10
Ururka Midowga Yurub wuxuu ku baaqey in si deg deg ah loogu laabto wadahadalada ku saabsan qabsoomida doorashooyinka, iyadoo aan dib loo dhigin, laguna saleynayo heshiiskii September 17.
Farmaajo oo dayacay Ciidankii ku jiray jiidda hore
Warbixin 20 April 2021 5:13
Is-dhiibista Janan / EXCLUSIVE
Farmaajo oo sirta Axmed Madoobe ku bixiyay $2.3 Mil.
Warbixin 27 March 2021 3:18
Taariikhda Madow ee Siyaad Barre
Farmaajo: Shalay wax ka baro
Faallo 10 February 2021 12:22
Warar 28 April 2021 15:39
Waxaa aad loo hadal hayaa magacyada afar Sargaal oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, kuwaas oo lagu amaanay in ay ka hor yimaadeen damaca Farmaajo ee muddo kordhinta.